DF Somalia oo amar kale kasoo saartay xiriirka ay u jartay Kenya | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DF Somalia oo amar kale kasoo saartay xiriirka ay u jartay Kenya
DF Somalia oo amar kale kasoo saartay xiriirka ay u jartay Kenya
(Muqdisho) 17 Dis 2020 – Somalia ayaa markale amar ku bixisay in saraakiisha Safaaradeeda Nairobi iyo qoysaskoodu ay Kenya kaga soo guuraan muddo 5 maalmood ah, jeer ay Kenya sheegtay inaysan qaadaynin tillaabo taa la mid ah.
Wasiir Dibadeedka Somalia ayaa amar ku soo saaray in dhamaanba shaqaalaha iyo howlwadeennada haatan halkaa ku harsani ay ka tagaan Nairobi sida ugu dhaqsiyaha badan.
Danjire Maxamed Nuur Tarsan ayaa isagu dabayaaqadii Nofeembar Xamar looga yeerey iyadoo xiriirka si rasmi ah loo jaray Talaadadii, taasoo ka dhigan in Safaaradda Somalia ee Nairobi aanay wax shaqo ah haatan haynin.
Si kastaba, Kenya ayaa iyadu dooratay dariiq kale iyadoo sheegtay inaysan qaadi doonin tillaabo middi middi ku taag ah oo aanay cayrin doonin diblomaasiyiinta iyo muwaadiniinta Somalia.
Previous articleMuxuu yahay DHAXALKA qura ee uu ka tago siyaasiga Soomaaliga ihi marka uu XILKA ka dego?
Next articleFALANQAYN QODAN: Shanta qodob ee ugu waawayn khilaafka ka taagan doorashada